Tallaal siinta dadka si looga ilaaliyo cudurrada faafa waxaa loo yaqaan tallaal. Cudurada qaarkood waa in si joogto ah loo tallaalaa si looga hortago (tusaale ahaan teetanada). Hal ama laba tallaal ayaa ku filan cudurada kale (sida cudurka dabaysha ama Corona).
Tallaalada ka imanaya soosaarayaasha BioNTech („Comernaty“), Moderna, AstraZeneca („Vaxzevria“) iyo Johnson&Johnson ayaa lagu ansixiyay Jarmalka .
Jarmalka dhexdiisa, gaar ahaan dadka da’da yar ee u dhexeeya 16 iyo 59 sano jir waxay qaadaan BioNTech. BioNTech ayaa hadda sidoo kale laga ansixiyay EU-da carruurta iyo dhallinta qaangaarka ah ee da’doodu tahay 12 sano. Halkaan waa inaan sugnaa sugitaanka talobixinta ee Guddiga Talaalka Joogtada ah, ha ahaato in dhammaan dadka laga bilaabo da’da 12 ama marka hore ay tahay in la tallaalo oo keliya haddii ay qabaan cudur hore.
Moderna waxaa hadda loo oggol yahay dadka jira 18 iyo wixii ka weyn.
Tallaalka Vaxzevria ee ka socda AstraZeneca ayaa sidoo kale loo oggolaaday da’ka 18 +. Guddiga Talaalka Joogtada ah wuxuu kula talinayaa talaalkan dadka jira 60 sano iyo wixii ka weyn.
BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca (Vaxzevria), dhanka kale, mid walba waa in la tallaalaa labo jeer iyadoo u dhexeysa dhowr toddobaad.
Maya, ma dooran kartid. Laakiin qofna ma aha inuu aqbalo soojeedinta tallaalka. Tallaalku had iyo jeer waa ikhtiyaari qof kasta oo Jarmalka jooga
Maxay dadka qaarkii u dareemaan xanuun tallalka kadib?
Dhammaan dhibaatooyinka soo raaca waa naadir! Tusaale ahaan, dhammaan tallaalada mararka qaarkood waxay leeyihiin fal-celin xasaasiyadeed. At AstraZeneca iyo Johnson & Johnson, waxaa jiray kiisas aad uyar oo xinjiro dhiig ah. BioNTech waxay hada baareysaa in kiisas yar oo myocarditis ah ay kiciyeen tallaalka.
Intaa waxaa dheer, kiisaska shaqsiyadeed ee curyaaminta dareemayaasha wajiga daran ayaa la arkay, taas oo dib ugu noqotay dhammaan kiisaska dhowr toddobaad kadib. Weli ma cadda in dhab ahaantii xiriir la leeyahay tallaalka.
14.	Sidey ee an ugu ilaashanahy tallaalka koowaad ka dhib?
Tan hadda waxaa lagu baarayaa si faahfaahsan. Sidaa darteed, weli ma jiro xog gebi ahaanba la isku halleyn karo. Xilligan, tallaalkii ugu horreeyay wuxuu horeyba u bixiyaa difaac wanaagsan oo aad u wanaagsan oo looga hortagayo koorso halis ah ama dhimasho ah Si kastaba ha noqotee, tani waxay socotaa oo keliya dhowr toddobaad ama bilo, markaa tallaalka labaad waa in marwalba la qaataa (marka laga reebo Johnson & Johnson, halkaasoo hal tallaal oo keliya looga baahan yahay). Tallaalka ugu horreeya, waxaad horeyba uheli doontaa taariikhda tallaalka labaad.
15.	Sidey ee an ugu ilaashanahy tallaalka laabad ka dhib?
Tallaalka labaad wuxuu dhammeystirayaa nidaamka tallaalka (marka laga reebo Johnson & Johnson, oo hal tallaal keliya looga baahan yahay). Waa in la sameeyaa xaalad kastoo jirta, maxaa yeelay la’aanteed difaaca tallaalka ee la helay tallaalkii ugu horreeyay ka dib ayaa mar kale hoos u dhici doona toddobaadyo iyo bilo kooban ka dib.
16.	Muddo intee le eg ayaan ku ilaashanahy tallaalka buuxo ka dhib?
Tan hadda waxaa lagu baarayaa si faahfaahsan. Khubarada ayaa hada sheegaya in wali aad sifiican aad u difaacantahay ugu yaraan lix bilood tallaalka labaad kadib. Tallaalka markaa kadib waa in la cusboonaysiiyaa. Waxay la mid tahay tallaalka teetanada. Tallaalkan waa in la cusbooneysiiyaa 10-kii sanaba mar.
17.	Da´daydu ma saamayn ku yelaata waxtarka tallaalka?
18.	Ma gudbin karaa fayraska inkasta oo la i tallaalo?
19.	Ma iska tallaali karaa markan Corna haystey iyo hadertan ka caafimaadey?
Haa, laakiin xaaladdan tallaal waxaa lagula talinayaa 6 bilood ka dib ugu horreyn si loo kiciyo sameynta difaaca jirka ee weli jira ee ka hortagga fayraska.
20.	Miya tahay inaan wali xirto masskada wajiga ka dib tallaalka oo aan raaco xeerarka nadaafadda?
21.	Waa maxay faa´ iidooyinka tallaalku?
22.	Ma jiraan dad leh halista ugu badan ee infekshinka kuwa kale marka la u firio?
23.	Maxay ka dhigan tahay „Kale hormarintu“?
Kala hormarinta macnaheedu waa in wax ay si gaar ah muhiim u yihiin. La xiriirida Corona, kala hormarintu waxay ka dhigan tahay in dadka sida gaarka ah ugu nugul khatarta weyn marka hore la ilaaliyo.
24.	Maxaa dadka hoyga wadajirka ah looga tallaaly waqti hore dadka kale?
Dadka ku jira hoyga wadajirka ah waxay halis weyn ugu jiraan in uu ku dhaco fayraska loo yaqaan ‚corona virus‘ maxaa yeelay dad badan ayaa halkan ku nool meel yar. Taasi waxay kaa dhigeysaa in masaafadaada aad u adkaato. Sidaas darteed si gaar ah ayey muhiim u tahay in si wanaagsan dadkaas loo ilaaliyo.
25.	Talaalada miyaa lagu baaranya qaxootiga?
Maya! Tallaalada waxaa lagu tijaabiyey mutadawiciin waqti dheer kahor. Dhanka kale, ku dhowaad laba bilyan oo walxo firfircoon ayaa loo isticmaalay tallaalada adduunka oo dhan. In kabadan hal bilyan oo qof, oo kudhowaad toddobada meelood meel dadka adduunka, ayaa si buuxda loo tallaalay.
26.	Ma la is tallali karaa haddi aan cudur hore qabo?
27.	Ma la tallaali karaa haddi aan uur leeyahay?
Tallaalka guud inta lagu jiro uurka hadda laguma talinayo, maadaama aan hadda xog laga helin isticmaalka tallaallada COVID-19 muddada uurka. Haddii haweeneyda uurka leh ay ku jirto khatar sare oo ah dariiq daran oo ah COVID-19 cudur hore awgood, tallaal ayaa lagu bixin karaa kiisaska shaqsi ahaaneed ka dib markii si taxaddar leh looga fiirsado halista iyo dheefaha iyo ka dib macluumaad faahfaahsan.
28.	Carruurta ma la tallali karaa?
Tallaalka BioNTech waxaa dhowaan laga ansixiyay EU-da carruurta iyo dhallinta qaangaarka ah ee da’doodu tahay 12 sano. Laakiin weli ma jiraan wax talo bixin ah oo ka imanaya guddiga tallaalka taagan. Waxaa lafilayaa in taladan marki hore loo sameyn doono oo kaliya caruurta iyo dhalinyarada qaangaarka ah ee cudurada kale hore u haystey
29.	Yaan la talaalin?
Dadka xanuunka dareemaya oo leh heerkul sarreeya, tusaale ahaan, waa in la tallaalo keliya markay caafimaad qabaan markale.
30.	Tallaalku ma wuxuu kaa dhigayaa mid nadiif ah?
31.	Maxay tallaallaa qaarkood lo joojiyee?
32.	Ma inaan isdiiwaangaliyo si laygu talaalo ?
Haa. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo diiwaan geliyo Gobolka Niedersachsen:
Lambarka taleefanka waa: 0800 99 88 665
Qadka taleefanka waxaa lala xiriiri karaa Isniinta ilaa Sabtida 8 subaxnimo ilaa 8 habennimo.
Qadka taleefanka ayaa xiran Axadaha iyo ciidaha.
Waxaad sidoo kale wici kartaa dhaqtarka qoyskaaga ama dhakhaatiirta aagga si toos ah. Dhakhaatiir badan ayaa ka talaala corona ficilkooda. Sida caadiga ah, waa inaad iska diiwaangelisaa halkaas ka hor waxaana jiri doona muddo sugitaan oo dhowr toddobaad ah. Shaqaalaha sooshalka waxay ka caawiyaan isdiiwaangalinta hoyga qaxootiga.
33.	Ma jiraa la-tashi ku saabsan tallaalka?
34.	Yaa si sax ah uga talaalaya Jarmalka?
Jarmalka gudaheeda, xarumaha talaalka sidoo kale waxay adeegsadaan kooxaha talaalka wareega, dhakhaatiirta guud iyo khabiiro, laga bilaabo 7 Juun 2021 dhakhaatiirta shirkadaha iyo dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay.
35.	Maxay yihiin kooxaha talaalka wareega?
Kooxaha talaalka wareega waa qeyb ka mid ah xarunta talaalka waana kooxo dhaqaatiir ah oo kaxeeya, tusaale ahaan, guryaha xanaanada iyo guryaha dadka waayeelka ah, hoyga wadajirka ah ee qaxootiga ama meelaha la degan yahay halkaas oo dad gaar ah oo aad u tiro badan ay ku nool yihiin meelo kooban. Waxaad si toos ah uga tallaalaysaa goobta xaaladaha caafimaad..
36.	Xaage ka heli karaa macluumaad dheeri ah?
37.	Talaalku ikhtiyaari ma yahay?
Haa. Jarmalka dhexdiisa, adiga ayaa had iyo jeer go’aan ka gaaraya naftaada haddii aad rabto in lagaa tallaalo iyo in kale.
38.	Miya lay ciqaabayaa hadaanan rabin talaalka?
39.	Talaalku miyuu saameyn ku leyhay nidaamka magangalyada?